दलालको विगविगी : कसरी होला नियन्त्रण ? - NA MediaNA Mediaदलालको विगविगी : कसरी होला नियन्त्रण ? - NA Media
दलालको विगविगी : कसरी होला नियन्त्रण ?
कुन ठाउँमा विगविगी छैन हिजोआज दलालको ? कम्पनी दर्ता गर्न जाऊँ दलाल, मालपोत कार्यालय जाऊँ दलाल, यातायात व्यवस्था कार्यालय जाऊँ दलाल ! हरेक सरकारी कार्यालय, कम्पनी, व्यापार व्यवसायमा दलालको विगविगी बढ्दो छ । हुँदाहुँदा मानिसको व्यक्तिगत सम्पतिमाथि पनि दलालले चासो राखिरहेका हुन्छन् ।
घर अगाडि खालि जग्गा देख्नै नहुने, नयाँ घर बनेको देख्नै नहुने ! ‘यो घरमा यति मानिस छन्, यतिका सबै जग्गा जमिन घरधनीलाई चाहिँदैन होला’ भनेर दलाल आफैँले मार्केटिङ गरिसकेका हुन्छन् । गजबको छैन त दलाली पेसा ?
काम छिटो होस् र झन्झट व्यहोर्न नपरोस् भनेर मानिसहरू यो राम्रो काम होइन भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि यही दलालको सहयोग लिन पछि हट्दैनन् ।
म सानो हुँदा एक जना बाह्य मानिसले रिस उठेर गाली गर्दा दलाल भनेर गाली गरेको सुनेकी थिएँ । त्यतिबेला के होला यो दलाल भनेको भन्ने लागेको थियो । पछि आफैँले स्कुटर किन्ने बेलामा र लाइसेन्स नवीकरण गर्ने बेलामा यातायात कार्यालयमा ‘के काम गर्ने दिदी ?’ भन्दै दलाल मेरो अगाडि आइपुग्यो । अफिस पनि गर्नुपर्ने भएकाले लामो लाइन बस्न मसँग समय थिएन, त्यसैले अलिकति बढी रुपैयाँ लिए लेओस् भनेर दलालमार्फत् काम गराएँ । पछि कम्पनी दर्ता गर्ने क्रममा पनि यस्तै भयो । दलाललाई नै रुपैयाँ बढी दिएर काम गराएँ ।
दलालको शाब्दिक अर्थ हो- बिचौलिया अर्थात् मध्यस्थकर्ता । यस्ता बिचौलियाले दुई पक्षबीच काम कुरो मिलाइदिन्छन् र त्यही कामकुरो मिलाइदिएवापत निश्चित रकम लिने गर्छन् । दलालले काम गरिदिएवापत कति रकम दिने भन्ने कुनै ऐन, नियम नभएको हुँदा मनपरीतन्त्र छ ।
न्यूनतम रुपैयाँमा हुने काम पनि दलालले ठग्न पायो भने मानिसलाई चौपट नै पार्ने गरी ठग्ने गर्छ । रुपैयाँ कमाउनु नै मुख्य उद्देश्य भएका यी दलालहरूले मानिसलाई यसरी पट्याउन जानेका हुन्छन् कि ‘ए, हो र’छ कि क्या हो ?’ भनेजस्तो गरी कुरा मिलाउन खप्पिस हुन्छन् ।
घर बनाउन जग खन्ने बेलादेखि बालुवा, इँट्टा, गिटी सस्तोमा मिलाइदिन्छु भन्ने दलाल हिजोआज प्रशस्त भेटिन्छन् । त्यति मात्र नभई, जग्गाको कारोबारदेखि घरको किनबेच र घर खालि देख्नासाथ भाडामा लगाइदिन दलालहरू नै सक्रिय हुन्छन् । घरधनीले घर भाडामा लगाउने हुन् कि होइनन् थाहा हुँदैन तर दलाललाई चासो परिरहेको हुन्छ । नयाँ घर देख्नासाथ उसले उपभोक्तालाई फलानो घर खालि छ भनेर घरका बारेमा जानकारी गराइसकेका हुन्छन् । कतिपय दलालहरूले संस्थागत रूपमा यस्तो काम गर्ने गरेका छन् । तर, कसैले भने व्यक्तिगत रूपमा न संस्था छ, न कार्यालय छ, आफैँ नै यस्तो काममा संलग्न छन् । कमाई खाने सजिलो बाटो भएकाले नै होला अफिस गर्नेले पनि हिजोआज फुर्सदको समय निकालेर दलाली काम गर्दै कमाइ गरिरहेका छन् । मुखले कुरा गरेर मिलाएकै भरमा मनग्य रुपैयाँ तुरुन्त कमाइ हुने भएपछि यसतर्फ मानिसहरूको आकर्षण बढ्दो छ ।
दलालका कारण जग्गा कारोबार र किनबेचको कामलाई केही सजिलो बनाएको भए पनि अब भने सरकारले यस्ता दलालहरूको निगरानी राख्नु जरुरी भइसकेको छ । काम गरिदिएवापत कति प्रतिशत रकम लिन पाउने भन्ने निश्चित दायरा बनाउन आवश्यक छ । होइन भने अहिलेको जस्तो प्रक्रियाले दलालले जति पनि कमिसन लिन सक्छन् । जग्गा बेच्ने र किन्ने दुवैतर्फबाट दलालले रुपैयाँ माग्ने गर्छन् । यसैगरी घर भाडामा बस्न घर खोज्दै हिँडेकाहरूसँग र घरधनीसँग पनि महिनौँ दिनको भाडा नै असुल्ने गरेका छन् ।
दलाली काम पुरुषले मात्र गर्दैनन्, हिँजोआज दलालको काममा महिला पनि संलग्न छन् । कतिपय महिलाहरू आफू बसेको क्षेत्र वरपर दिनभर घुम्छन् र घर खालि भए वा नभएको पत्ता लगाउँछन् । खालि जग्गा र घर देखे भने घरधनीको सोधीखोजी गर्छन् । न पढ्नुपर्ने, न कुनै डिग्री हासिल गर्नुपर्ने ! रुपैयाँ कमाउने सजिलो बाटो भएकाले दलाली काममा महिलाहरूको पनि उत्तिकै संलग्नता देखिएको हो । घर भाडामा लगाउने काममा धेरै महिला दलालहरूको संलग्नता रहेको यस क्षेत्रका व्यवसायीहरू बताउने गर्छन् ।
सरकारी कार्यालयमा दलालको विगविगी बढ्नुको मुख्य कारण भनेको कर्मचारी इमान्दार नहुनु हो । राष्ट्रको तलब र सुविधा उपभोग गरेर पनि त्यतिले नपुगेपछि कालो धन जम्मा पार्न कर्मचारीले नै दलाललाई हात लिएका हुन्छन् । दलालले ल्याएका यतिवटा फाइलको यतिवटा काम गरिदिएपछि कर्मचारीलाई यति रकम दिइने भन्ने शर्तमा काम सम्पन्न हुने गर्छन् । हाकिमलाई यति रकम दिनुपर्छ भनेर दलालले नै उपभोक्तासँग मोलमोलाई गर्ने गर्छन् । उपभोक्तालाई समयमै चुस्त सेवा दिन अल्छी मान्ने तर दलालसँग रुपैयाँ लिएर काम गर्न पल्केका सरकारी कर्मचारीले आफ्नो आचरण नसुर्धासम्म सरकारी कार्यालयमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार रोकिनेवाला छैन ।
यसैगरी दलालले ल्याएको काम मात्र गरेर कालो धन कमाउने कर्मचारीको निगरानी र नियन्त्रण जबसम्म सरकारले गर्दैन, तबसम्म सरकारी कार्यालयमा दलालहरूकै बर्चस्व बढिरहने निश्चितप्रायः छ । प्राइभेट क्षेत्रमा यदि दलालले काम गरेवापत रकम लिन पाउने हो भने कति प्रतिशत रकम दलालले लिने भन्ने स्पष्ट नियम बनाउन आवश्यक छ । होइन भने हरेक क्षेत्रमा दलालको चंगुलबाट मुक्त हुन निकै कठिन छ ।लोकसम्बाद
स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई खुलापत्र:
कोरोना भाईरस बिरुद्दको लडाई:लकडाउन साथै यसो गरे मात्र…
कोरोना भाईरसको बड्दो आतंक- संयमित बनौं, सुरक्षित बनौं।
खाडीमा घरेलु कामदार खुलाउने बिषय मा ‘स्वार्थ समुह’को नभई ‘जनमतको कदर’ होस
‘एनआरएनएको प्रस्तावनामै ‘गैर राजनैतिक’ भन्नु कोरोना भाइरस भन्दा पनि खतरनाक’
साउदी अरबबाट दश महिना मा ९६ शव, कारण के?